भीमफेदी कारागारबाट कैदी फरार – Samacharpati
भीमफेदी कारागारबाट कैदी फरार
चुरियामाई, १ मङ्सिर । मकवानपुरको भीमफेदी कारागारबाट गएराति कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका एक कैदी फरार भएका छन् । कारागार प्रशासनका अनुसार ३० वर्षका कुलदीपराज धामी फरार भएका हुन् । कारागारका प्रमुख जेलर प्रकाश खनालले कैदीलाई भगाउन कसैको सहयोग रहेको आशङ्का गर्दै कारागार वरिपरि १२ फिटभन्दा अग्लो पर्खाल रहेकाले नाघेर भाग्न एक्लैले सम्भव नरहेकाले अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
यद्यपि पर्खालको केही सानो भागमा ग्याप रहेको र त्यहाँ तार तानिएको भेटिएकाले धामी त्यहीबाट भागेको हुनसक्ने अनुमान रहेको उहाँले बताउनुभयो । धामीको खोजीका लागि उनको स्थायी घर चितवन र पुरानो ठेगाना सुनसरीमा समेत ‘अर्लट’ गरिएको जेलर खनालले बताउनुभयो ।
कारागारमा रहेका कैदीहरूको आन्तरिक प्रशासनले राति पौने १० बजे आफूलाई खबर गरेपछि तत्कालै खोजीकार्य अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । जिल्ला अदालतबाट कर्तव्य ज्यान मुद्दामा २० वर्ष जेल तोकिएका धामीले पाँच वर्षदेखि सजाय काटिरहेका थिए ।
काेराेनासँग जुध्न सहजताका लागि तातोपानी नाका खुल्ने
‘म आफैं भष्टाचार हुन दिन्न र गर्नेलाई पनि छोडदिन’ : प्रधानमन्त्री
लकडाउनकाे समयमा सेवामा खटिनेलाई दैनिक निःशुल्क खाना खुवाउँदै डल्ले रेष्टुराँ
बैशाख १८ गतेसम्म लम्ब्याइयाेअन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रतिबन्ध
भरतपुरमा पहिलो पटक परीक्षण गरिएका २१ वटा नमूना नेगेटिभ
निजी लगानीका विद्यालयको शुल्कमा एकरुपता ल्याउनु पर्नेमा जोड
मेयर–उपमेयर को बोलचाल नै बन्द ! जनताका काम कसरी गर्दै होलान ?
फेसबुक ग्रुप हाम्रो पोखराले गर्यो अन्तराष्ट्रिय रंगशालाको लागि सहयोग
डुङडुङा सामुदायिक वनमा खानेपानीको पाइप बिछ्याउँदै भिमादबासी